Sifumana amagama abapostile aba-12 kuMateyu 10: 2-4, kuMarku 3: 14-19, nakuLuka 6: 13-16:
Kwathi ekufikeni kwakhe, wabiza abafundi bakhe, wakhetha kubo abalishumi elinambini, ababiza ngokuba ngabapostile; nguSimon owamthiya nguPetros , noAndreya umzalwana wakhe, noYakobi , noYohane , noFilipu , noBartolomewu , noMatewu , noTomas , UYakobi unyana ka-Alfayo , noSimon obizwa ngokuba nguZeyotot, noYuda obizwa ngokuba nguTadedi, noYude, unyana kaYakobi, noYudas Iskariyoti , waba ngumkhapheli. (ESV)
UYesu Kristu wakhetha amadoda angama-12 phakathi kwabafundi bakhe bokuqala ukuba abe ngabafundi bakhe abasondeleyo. Emva kwenkqubo yokufundisa yabafundi kunye nokulandela uvuko lwabafileyo, iNkosi yathumela ngokupheleleyo abapostile (Mateyu 28: 16-2, Marko 16:15) ukuqhubela phambili ubukumkani bukaThixo nokuhambisa isigidimi sobungqina kwihlabathi.
La madoda abe ngabafundisi beenkonzo zeCawa yeTestamente eNtsha, kodwa babengenazo iimpazamo kunye nokungaphumeleli. Ngokuthakazelisayo, akukho mnye wabafundi abakhethiweyo abangu-12 wayengumfundi okanye umfundisi. Babengenalo izakhono ezingavamile. Ayikho inkolo, ayilungiswanga, babengabantu abaqhelekileyo, njengawe kunye nam.
Kodwa uThixo wayezikhethele ngenjongo-ukutshisa ilangabi leendaba ezilungileyo eziza kusasazeka ebusweni bomhlaba kwaye ziqhubeke zitshisa ezigqithiseleyo kwiinkulungwane ezilandelayo ukulandela. UThixo ukhethe kwaye wasebenzisa ngalinye lala maxesha aqhelekileyo ukuba enze isicwangciso sakhe esicacileyo.
Abapostile aba-12 bakaYesu Kristu
Thatha amaxesha ambalwa ngoku ukuba ufunde isifundo okanye amabini kubapostile aba-12-amadoda awanceda ukutshabalalisa ukukhanya kwenyaniso esahlala ezintliziyweni zethu namhlanje kwaye usinxuse ukuba size silandele uYesu Kristu.
Inkcukacha "Yeliso kuPetros" nguJames Tissot. SuperStock / Getty Izithombe
Ngaphandle kwembuzo, uMpostile uPetros wayeyi-duh-ininzi yethu inokuthi siyiqonde. Ngenye imzuzu wayehamba emanzini ngokholo, kwaye emva koko wayesezela ngokungathandabuzekiyo. U-Peter uyaziwayo ngenxa yokukhanyela uYesu xa uxinzelelo. Nangona kunjalo, njengomfundi wayethandwa kakhulu nguKristu, ephethe indawo ekhethekileyo phakathi kwabalishumi elinesibini.
UPetros, ngokuqhelekileyo ungumkhulumeli wabalishumi elinesibini, ubonakala kwiVangeli . Nanini na xa amadoda edweliswe, igama likaPetros liqala. Yena, uYakobi, noYohane babumba isangqa sangaphakathi salamano abasondeleyo bakaYesu. Ezi zintathu zodwa zanikezwa ilungelo elikhethekileyo lokufumana ukuguqulwa kwesiguqulelo , kunye neminye imbonakaliso embalwa kaYesu engavamile.
Emva kokuvuswa kukaKrestu, uPetros waba ngumvangeli oyisibindi kunye nomthunywa wevangeli, kunye nenye yeenkokeli ezinkulu zecawa yokuqala. Ukunyamekela kude kube sekupheleni, iimbali-mlando zirekhoda ukuba xa uPetros egwetyelwe ukufa ngokubethelelwa esiphambanweni , wacela ukuba ikhanda lakhe liphendukele emhlabathini ngenxa yokuba wayengakufanelanga ukufa ngendlela efanayo noMsindisi wakhe. Fumana ukuba kutheni ubomi bukaPetros buhambisa ithemba elikhulu namhlanje. Kaninzi "
Inkolelo ithi uAndrew wafa njengomfel 'ukholo kwiCroxx Decussata, okanye u-cross-shaped cross. Leemage / Corbis ngokusebenzisa i-Getty Izithombe
Umpostile uAreya wamshiya uYohane uMbhaptizi ukuba abe ngumlandeli wokuqala kaYesu waseNazarete, kodwa uYohane akazange akhumbule. Wayeyazi ukuba umnqophiso wakhe ukubonisa abantu kuMesiya.
Njengoko abaninzi bethu, uAndreya wayehlala emthunzini wendoda yakhe edumile, uSimon Peter. UAndreya wamkhokela uPetros kuKrestu, wabuyela kwimvelaphi njengoko umzalwana wakhe owayenomsindo waba yinkokheli phakathi kwabapostile nakwicawa yokuqala .
Iincwadi zeVangeli akusixeleli ngokubanzi ngo-Andrew, kodwa sinokufunda phakathi kwemizila kwaye sifumane umntu onxanelwe inyaniso aze akufumene emanzini aphilileyo kaYesu Kristu. Fumana indlela umdobi olula alahle ngayo iminatha yakhe elunxwemeni waza wahamba waba ngumlobi obalulekileyo. Kaninzi "
Ingcaciso ye "USanta James Omkhulu" nguGuido Reni, c. 1636-1638. IMyuziyam yoBugcisa, iHouston
UYakobi unyana kaZebhedewu, odla ngokuba nguYakobi Omkhulu ukuba amhlule kumnye umpostile ogama linguYakobi, wayeyilungu likaYesu Kristu ngaphakathi, elaliquka umzalwana wakhe, umpostile uYohane noPetros. UJakobe noYohane kuphela abafumana isiteyeliso esikhethekileyo esivela eNkosini- "onyana beendudumo" -naye banelungelo lokuba ngaphambili kunye neziganeko ezintathu zezinto eziqhelekileyo ebomini bukaKristu. Ukongeza kwezi ntlonelo, uYakobi wayengowokuqala kwabafundi abalishumi elinesibini ukuba abulawe ukholo lwakhe ngo-AD 44 .
Inkcukacha "kaYohane oyiNgcwele uMvangeli wevangeli" nguDomenichino, ngasekupheleni kwe-1620. Igalari yeSizwe yoLuntu, eLondon
Umpostile uJohn, umzalwana kuYakobi, wayebizwa ngokuba nguYesu omnye "oonyana beendudumo," kodwa wayekuzibiza ngokuba "ngumfundi uYesu amthandayo." Ngomlilo wakhe kunye nokuzinikela okukhethekileyo kuMsindisi, wafumana indawo enomdla kwisangqa sangaphakathi sikaKristu.
Impembelelo enkulu kaYohane kwicawa yokuqala yamaKristu kunye nobukhulu bakhe kunobomi, yenze isifundo somntu esithakazelisayo. Imibhalo yakhe ibonisa iimpawu ezahlukileyo. Ngokomzekelo, ngeentsasa zokuqala zePasika , ngokunyamekela kunye nentliziyo yakhe, uJohn wambamba uPetros engcwabeni emva kokuba uMary Magdalena abike ukuba kwakungekho nto. Nangona uJohn wayephumelele umncintiswano kwaye waziqhayisa ngale mpu melelo kwiVangeli (uYohane 20: 1-9), ngokuthobeka wamvumela uPetros ukungena ethuneni kuqala.
Ngokwesiko, uJohn waphila bonke abafundi, efa ngenxa yokuguga e-Efese, apho wayeshumayela khona iindaba ezilungileyo zothando kunye nokufundiswa ngokuchasene nokunyaniseka . Kaninzi "
Inkcukacha "Umpostile uSt. Philip" ngu-El Greco, 1612
UFilipu wayengomnye wabalandeli bokuqala bakaYesu Kristu , kwaye akazange achithe ixesha elibi esithi abanye , njengoNathanayeli, benze okufanayo. Nangona encinane iyaziwa ngaye emva kokunyuka kukaKrestu, izazi-mlando zeBhayibhile zikholelwa ukuba uFilipu washumayela ivangeli eFrigiya, e-Asia Minor, waza wafa njengomfel 'ukholo apho eHerapolis. Funda indlela uFilipu afuna ngayo inyaniso yamkhokelela ngqo kuMesiya othenjisiweyo. Kaninzi "
UNataniyeli okanye uBartholomew
Ingcaciso ethi "Ukufa Kwamandulo kaSt Bartholomew," ngoGiambattista Tiepolo, 1722 - 1723. USergio Anelli / Electa / Mondadori Iphothifoliyo ngokusebenzisa i-Getty Izithombe
UNatanel, ekholelwa ukuba ngumfundi uBartolomew, wafumana ukudibana kokuqala noYesu. Xa uMpostile uFilipu wambiza ukuba eze eze kumhlangabeza uMesiya, uNatanel wayengenakuthemba, kodwa wahamba ngokulandela. Njengoko uFilipu wammisela uYesu, iNkosi yathi, "Nanku umSirayeli oyinyaniso, okungekho buxoki kuye." Ngokukhawuleza uNathanayeli wayefuna ukwazi, "Uyayazi njani na?"
UYesu wamnceda xa ephendula wathi, "Ndakubona xa usengaphansi komkhiwane ngaphambi kokuba uFilipu akubizele." Ewe, loo nto yayimisa uNataniyeli kwiindlela zakhe. Wothuka waza wamangaliswa wathi, "Rabbi, nguNyana kaThixo , nguwe ukumkani wakwaSirayeli."
UNatanel wafumana imigca embalwa kwiincwadi zeVangeli, nangona kunjalo, waba ngumlandeli othembekileyo kaYesu Kristu. Kaninzi "
Inkcukacha ye "uMpostile uMateyu" ngu-El Greco, 1610-1614. Leemage / Corbis ngokusebenzisa i-Getty Izithombe
ULevi, owaba nguMpostile uMateyu, wayengumphathi wezithethe eKapernahum owathengisa iimpahla zangaphandle kunye nokuthunyelwa ngaphandle ngaphandle kwesigwebo sakhe. AmaYuda amthiyile ngenxa yokuba wasebenza eRoma waza wangcatsha abantu bakubo.
Kodwa xa uMathewu umqokeleli werhafu ongathembeki weva amazwi amabini kuYesu, "Ndilandele," wamshiya yonke into waza wamthobela. Njengathi, wayenqwenela ukuba amkelwe kwaye amthande. UMateyu wambona uYesu njengomntu ofanelekileyo. Fumana ukuba kutheni, iminyaka engama-2 000 emva koko, iVangeli likaMathewu onokuzibonela isandila umnxeba ongenakuphikiswa. Kaninzi "
"Ukunyuswa koSanta Thomas" nguCaravaggio, 1603. Ulawulo lwesizwe
Umpostile uTomas udlalwa ngokuba ngu "Ukungabaza uTomas" ngenxa yokuba akazange akholelwe ukuba uYesu uvukile kwabafileyo waze wabona waza wathintela amanxeba kaKristu. Nangona abafundi behamba, nangona kunjalo, imbali ilandele uTomas umlingo we-rap. Emva koko, omnye wabapostile abangu-12, ngaphandle kukaYohane, wamshiya uYesu ngexesha lokulingwa kwakhe nokufa eKalvari .
UTomas, njengathi, wayedla ngokugqithisa. Ngaphambili wayebonise ukholo olomeleleyo, wayezimisele ukubeka ubomi bakhe engozini ukuze alandele uYesu eYudeya. Kukhona isifundo esibalulekileyo esingafunyanwa ekufundeni uTomas: Ukuba sifuna ngokwenene ukwazi i nyaniso, kwaye sinyanisekile thina kunye nabanye malunga neengxaki zethu nokungathandabuzeki, uThixo uya kuhlangana nathi ngokuthembeka aze azibonakalise kuthi, njengoko wenzela uTomas. Kaninzi "
UYakobi Omncinane ungomnye wabapostile abafihlakeleyo eBhayibhileni. Eyona nto kuphela into esiyaziyo ngokuqinisekileyo igama lakhe kwaye wayekho ekamelweni eliphezulu laseYerusalem emva kokuba uKristu enyukele ezulwini.
Kwimadoda elishumi elinesibini e-Ordinary Men , uJohn MacArthur ucetyisa ukuba ukungafihli kwakhe kwakube ngumqondiso ocacileyo wobomi bakhe. Fumana ukuba kutheni uYakobi Omncinci 'ukugqitywa ngokungaziwayo angabonakalisa into ebalulekileyo malunga nomlingiswa wakhe. Kaninzi "
Inkcukacha "Umpostile uSimon" ngu-El Greco, 1610-1614. Imifanekiso emihle yezobugcisa / iimifanekiso zeMveli / i-Getty Izithombe
Ngubani ongathandi imfihlakalo enhle? Ewe, iZibhalo zisisichazela kwimigqomo embalwa abaphengululi abangasayi kusombulula. Enye yale mibuzo ephazamisayo kukuba nguSimon umZealot, umfihlakalo weBhayibhile umpostile.
ISibhalo isitsho ngokungathi nanye ngoSimon. Kwiincwadi zeVangeli, ukhankanywe kwiindawo ezintathu, kodwa kuphela ukuluhlula igama lakhe. KwiZenzo 1:13 sifunda ukuba wayekho nabapostile egumbini eliphezulu laseYerusalem emva kokuba uKristu enyukele ezulwini. Ngaphandle kweenkcukacha ezimbalwa, sinokuthi sicacise ngoSimon kunye negama lakhe njengoZealot. Kaninzi "
UTadedi okanye uYude
Inkcukacha ye "Sawudini Tade" nguDomenico Fetti. © Arte & Immagini srl / Corbis ngokusebenzisa i-Getty Images
Uluhlu kunye noSimon umZealot noYakobi oMncinci, uMpostile uThadedi ugqiba iqela labafundi abancinane. Incwadi ethi uJohn MacArthur ethi ngabapostile, uThadede, owaziwa ngokuba nguYudas, ubizwa ngokuba ngu-tender-hearted, indoda ethobekileyo eyayibonisa ukuthobeka komntwana.
Abanye abaphengululi bakholelwa ukuba uThadedi wabhala incwadi kaYuda. Yincwadana emfutshane, kodwa iindidi ezimbini zokuvala ziqulethe i-doxology enhle, enye yezona ndlela ezigqwesileyo zokudumisa uThixo kwiTestamente Entsha. Kaninzi "
Ngokuzisola, uYudas Iskariyoti uphonsa phantsi iingcezu ezingama-30 zesilivere afunyenwe ngentlawulo yokumngcatsha uKristu. I-Hulton Archive / Getty Izithombe
UYudas Iskariyoti ungumpostile wamngcatsha iNkosi yakhe ngokubanga. Ngenxa yalesi senzo esiphezulu sokukhohlisa, abanye bathi uYuda Iskariyoti wenza iphutha elikhulu kwiimbali.
Ngexesha elidlulileyo, abantu baye bavakalelwa okanye baxakekile ngoYudas. Abanye baziva benenzondo ngaye, abanye baziva beba novelwano, kwaye abanye baye bamjonga njengeqhawe . Kungakhathaliseki ukuba usabela njani kuye, into enyanisekileyo, amakholwa angenelwa kakhulu ngokujonga ngokubalulekileyo ubomi bakhe. Kaninzi "
UYesu Uthanjiswa Ngumfazi Owonayo - Ingxelo Yomxholo weBhayibhile
Iimfundiso zeBhayibhile malunga nokuzimela
Abaququzeleli be-Co-Conspirators ekufeni kukaYesu
I-American Cheetah (Miracinonyx)
Izifo zaseFransi, izibhobho kunye neFlip-flops Isigama-les Chaussures
Uthando lweLibra noCapricorn
Ukuphucula iSikhumbuzo Sakho NgeCandelo LoLuntu Lwamandulo
Ukuvula iso lakho lesithathu
I-CHAPMAN Igama Lokugqibela Igama & Isiqalo
Indlela Yokuzuza I-Bike - Ngaba Ngaba Oku Kukhulu Kangako?
Amancinci amancinci: i-Natural, iHarmonic kunye ne-Melodic
IziCwangciso zokuHlola eziPhambili kunye nezicelo
Injongo yoFundo yoHlelo oluQhuqulwayo kunye noDelphi
Indlela yokudlala iCandelo elingaphantsi kweKratshi